Iindaba -Ibhodi yabalawuli kunye nentlanganiso yabanini zabelo ye-BEIJING SHOUGANG GITANE NEW MATERIALS CO., LTD yabanjwa ngempumelelo kwi-2020
Ibhodi yabalawuli kunye nentlanganiso yabanini zabelo ye BEIJING SHOUGANG GITANE NEW MATERIALS CO., LTD yabanjwa ngempumelelo kwi2020.
Nge-16 ka-Okthobha, ibhodi ye-4 yabalawuli kunye nentlanganiso jikelele ye-17 yabanini zabelo BEIJING SHOUGANG GITANE NEW MATERIALS CO., LTD zabanjwa ngempumelelo kwigumbi lenkomfa lenkampani. U-Li Chundong, usekela mphathi jikelele wenkampani yezemali, abalawuli, abaphathi kunye nabameli bezabelo bazimase le ntlanganiso ngokwahlukeneyo. Intlanganiso ibikhokelwa ngu-Li Gang, Unobhala wekomiti yeqela, usihlalo kunye nomphathi jikelele.
Kwi-2020, ibhodi yabalawuli kunye nentlanganiso yabanini zabelo yaxoxa yaza yapasisa isisombululo sentlanganiso.
Kwintlanganiso ye-17 yabanini bezabelo benkampani, uComrade Li Gang wanikela intetho ekhethekileyo yokugqitywa kwezalathi ezahlukeneyo zeshishini kwikota ezintathu zokuqala zika-2020, kwaye wenza izicwangciso kwikota yesine ukuqinisekisa ukugqitywa kwazo zonke izalathi kunye nemisebenzi unyaka wonke, kwaye wabeka isiseko esihle sophuhliso ngo-2021.
U-Li Chundong uqinisekise ngokupheleleyo izikhombisi zeshishini ze-GITANE, ulawulo lwamashishini, ulawulo lomngcipheko, ukwakhiwa kwetalente, kunye nolwakhiwo lwenkcubeko e-2019. Ejolise ekugqityweni komsebenzi wenkampani yeGITANE kwikota ezintathu zokuqala zika-2020, uQabane Li Chundong wabonisa ukuba phantsi kobhubhane. kulo nyaka, ngemizamo edibeneyo yeqela elikhokelayo le-GITANE, bonke abanini zabelo kunye nabo bonke abasebenzi, ukusebenza kweshishini ngoku kufezekisiwe, kwaye impumelelo bekungekho lula ukuyifumana. Kwimeko yolawulo lweshishini, yenze umsebenzi omninzi, yanxibelelana ngokubonakalayo namasebe karhulumente, kwaye yaba lishishini elikhuthazwayo ukuba liphuhlise kwiSithili seChangping; lwenze uqeqesho olucwangcisiweyo kubo bonke abasebenzi; zisombulule iingxaki ezishiyekileyo kwimbali; sakhe iindawo ezintsha zemisebenzi yabasebenzi ukutyebisa ixesha lenkcubeko labasebenzi, eliqhubele phambili liphucula imeko yokuba ngabasebenzi kunye nemishini yokukhuthaza umgangatho ophezulu wamashishini.
Ixesha leposi: Dec-28-2020
Umbane wesiFudumezi, Ihowuliseyili Ubushushu Electrical Wire, Umbane oFudumeza umbane ngombane, Ukuxhathisa ngombane, Ucingo lokuFudumeza ngombane, Ubushushu Resistant Electrical Wire,